Garsoore Soomaaliyeed oo qabanaya cayaarta furitaanka CECAFA | Somchess.net
You are here : Somchess.net » wararka » Garsoore Soomaaliyeed oo qabanaya cayaarta furitaanka CECAFA
Posted On Monday, June 17, 2013 By admin. Under wararka
Cayaarta furitaanka ee tartanka ayaa waxaa ku har-dami doona kooxda Al-hilal ee dalka Sudan iyo kooxda URA ee dalka Uganda. Sida lagu sheegay qoraal kasoo baxay kulanka CECAFA galabta waxaa garsooraha Soomaaliyeed Xasan Wiish Xaaji Yabarow calan wadeyaasha koobaad iyo labaad u kala noqon doona Hakizimana Ambroise (Rwanda) iyo Abdullahi Mahamoud (Djibouti) halka Louis Hakizimana (Rwanda) uu isna noqon doono sarkaalka afaraad ee cayaarta ama garsooraha keydka sida Soomaalidu u taqaano.
“Aad ayaan ugu kalsoonahay in Garsoore Wiish uu qaban doono cayaarta finalka maalin maalmaha ka midana uu ka dhex muuqan doono koobka aduunka—waa meeshaas meesha aan hamineyno sababtoo ah shaqadiisa iyo xiriirka dhanka indhaha ah ee uu sida joogtada ah ula sameynayo calan wadyaashiisa ayaa ah mid aad u sareeya”ayuu yiri Mr Baasaale.
« Somalia jubilant at ANOC meeting outcome
Xiriirka K/Gacanta oo Muqdisho ka furey Tartankii Xidigaha + Sawiro »